Injineer Yariisow oo sheegay in howlgal ka dhacay Sh/hoose lagu dilay hoggaamiye ka tirsan Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Injineer Yariisow oo sheegay in howlgal ka dhacay Sh/hoose lagu dilay hoggaamiye ka tirsan Al-shabaab
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa shaaciyay in howlgal ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 5-tii bishaan ka fulliyeen gobolka Sh/hoose ay ku dileen hoggaamiyihii Al-shabaab u qaabilsanaa gobolkaasi Macalin Cismaan Cabdi Badil iyo seddax ka mid ah dagaalyahanadda Al-shabaab.
Wuxuu Injineer Yariisow tilmaamay in dhimashada hoggaamiyahaasi Al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Sh/hoose ay tahay mid sii wiiqeysa awooda kooxda Al-shabaab ay ku leeyihiin gobolkaas, kuwaas oo uu sheegay inay dagaal xoogan kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, wuxuu Injineer Yariisow sheegay in howlgalkaasi ay ciidanka xoogga ka fulliyeen gobolka Sh/hoose uu ahaa mid dib lagu xoojinayo dagaalka lagula jiro kooxda Al-shabaab, islamarkaana looga hortagaayo cabsida joogtada ah oo ay Al-shabaab ku haayaan shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, Injineer Yariisow ayaa ugu baaqday dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ka tirsan dagaalyahanadda Al-shabaab, inay haatan haystaan fursad ay uga soo bixi karaan Al-shabaabka, islamarkaana ay uga qeyb qaadan karaan dib u dhiska dalkooda Soomaaliya.
Inta badan dhalinyaradda Soomaaliyeed ayaan haysan wax shaqo ah, waxayna arrintaasi ku keeneysaa inay isaga biiraan dagaalyahanadda Al-shabaab, si ay noloshooda halkaasi uga maareeyaan.